Ch 17 Luke – 2azụ
Home / Bible / Oziọma Luk / Ch 17 Luke
17:1 Ọ si-eso ụzọ ya: "Ọ gaghị ekwe omume n'ihi na scandals ghara ime. Ma ahụhụ ya ga-esi n'ọnụ ha na-abịa!
17:2 Ọ ga-aka mma ka ya ma ọ bụrụ na a nkume igwe nri e tinyere na ya n'olu ma wee tụba ya n'oké osimiri, karịa ka iduhie otu n'ime ndị a dị nta.
17:3 Chọpụta ihe onwe unu. Ọ bụrụ na nwanne gị mere gị, dozie ya. Ma ọ bụrụ na o chegharịrị, agbaghara ya.
17:4 Ma ọ bụrụ na o mere gị ugboro asaa n'ụbọchị, na ugboro asaa n'ụbọchị emewo ka unu, si, 'Ọ dị m nwute,'Mgbe ahụ ịgbaghara ya. "
17:5 Na ndi ozi ahụ gwara Onyenwe anyị, "Mmụba okwukwe anyị."
17:6 Ma Onyenwe anyị sịrị: "Ọ bụrụ na unu nwere okwukwe dị ka a nkpuru mustard, i nwere ike ịsị a mulberry osisi, 'Ka e fopụ, ma na a ga dọgharịala n'ime oké osimiri. 'ọ ga-erubekwara unu.
17:7 Ma nke ị, nwere a ohu akọ ubi ma ọ inye ehi nri, na-asịkwa ya, dị ka ọ nọ na-alọta si n'ubi, 'Bịa na ozugbo; nọdụ ala na-eri,'
17:8 na agaghị sị ya: 'Kwadebenụ m nri ehihie; eke ákwà n'úkwù, na-ejere m ozi, mgbe m na-eri na ihe ọṅụṅụ; na mgbe ihe ndị a, unu ga-eri ma na-aṅụ?'
17:9 Ọ ga-abụ ekele na ohu, na-eme ihe o nyere ya iwu ime?
17:10 M na-eche ọ bụghị. N'ihi ya, kwa, mgbe unu mere ihe ndị a niile na a kụziiri gị, ị ga-asị: 'Anyị bụ ndị na-abaghị uru ohu. Anyị mere ihe anyị kwesịrị ime. '"
17:11 Ma ọ mere na, mgbe ọ na-ejegharị ejegharị na-Jerusalem, ọ gabiga n'etiti Sameria na Galili.
17:12 Na ka ọ na-abanye a ụfọdụ obodo, iri ekpenta ikom zutere ya, ha guzo n'ebe dị anya.
17:13 Ha we welie olu-ha, si, "Jesus, Onye Ozizi, -emetara anyị ebere. "
17:14 Na mgbe ọ hụrụ ha, o kwuru, sị, "Gaa, na-egosi ndị nchụàjà onwe unu. "O rue na, dị ka ha na-aga, ha na-ọcha.
17:15 Na otu n'ime ha, mgbe ọ hụrụ na ọ na-ọcha, laghachi, -etokwa Chineke n'oké olu.
17:16 O wee daa ihu ala n'ihu ụkwụ ya, na-ekele. Na onye a bụ onye Sameria.
17:17 Na na nzaghachi, Jizọs kwuru, sị: "Ọ bụ na iri ọcha? Na otú ebe bụ itoolu?
17:18 Ọ dịghị onye na hụrụ ndị ga-alaghachi na-enye Chineke otuto, ma e wezụga nke a mba ọzọ?"
17:19 O wee sị ya: "Bilie, -aga. N'ihi okwukwe gị azọpụtawo gị. "
17:20 Mgbe ahụ ọ jụrụ ya ajụjụ ndị Farisii: "Mgbe otú alaeze Chineke na-abata?"Ndien ke nzaghachi, O wee sị ha: "The alaeze Chineke abịarute unobserved.
17:21 Ya mere, ha agaghị na-ekwu, Le, ọ bụ ebe a,'Ma ọ bụ' Le, ọ bụ n'ebe ahụ. 'N'ihi na, le, alaeze Chineke dị n'ime unu. "
17:22 Ọ si-eso ụzọ ya: "The oge ga-abịa mgbe unu ga-achọ ịhụ otu ụbọchị Nwa nke mmadụ, na ị gaghị ahụ ya.
17:23 Ha ga-asị gị, Le, ọ bụ ya bụ ebe a,'Na' Le, ọ bụ n'ebe ahụ. 'Unu ahọrọ na-aga si, na-adịghị agbaso ha.
17:24 N'ihi na dị nnọọ ka àmụmà mgbukepụ n'okpuru elu-igwe na-enwu ka ihe ọ bụla dị n'okpuru eluigwe, otú a kwa ga-ahụ Nwa nke mmadụ na-ụbọchị ya.
17:25 Ma akpa ọ ga-ata ọtụtụ ahụhụ, ihe na-ọgbọ a ajụkwa ya.
17:26 Na dị nnọọ ka ọ mere na ụbọchị Noa, otú a kwa ka ọ ga-n'ụbọchị Nwa nke mmadụ.
17:27 Ha na-eri, na-aṅụ; ha nọ na-nwunye na-alụ nwunye, ọbụna ruo ụbọchị Noa banyere n'ụgbọ ahụ. Na iju mmiri ahụ bịara ma bibie ha niile.
17:28 Ọ ga-abụ yiri ihe mere na n'ụbọchị Lọt. Ha na-eri, na-aṅụ; ha nọ na-azụ ma na-ere; ha na-akuku na ụlọ.
17:29 Mgbe ahụ, n'ụbọchị Lot we si na Sọdọm, ọ Mmiri zoro ọkụ na brimstone si n'eluigwe, na ọ bibie ha niile.
17:30 Dị ka ihe ndị a, otú a ka ọ na-adị n'ụbọchị ahụ mgbe Nwa nke mmadụ ga-ekpughe.
17:31 N'oge awa ahụ, onye ọ bụla ga-abụ na n'elu ụlọ, na ngwongwo ya n'ulo, ka ọ ghara ịgbada iji ha. Na onye ọ bụla ga-abụ na ubi, N'otu aka ahụ, ka ya ahapụghịkwa.
17:32 Cheta nwunye Lọt.
17:33 Onye ọ bụla chọrọ ime ka zọpụta ndụ ya, ga-atụfu ya; na onye ọ bụla ka furu efu ya, ga-eweta ya azụ ndụ.
17:34 M asị unu, na n'abalị, abụọ ga na-edina n'otu ihe ndina. Onye ga-ẹdọk, na ndị ọzọ na a ga-hapụrụ.
17:35 Abụọ ga-abụ na grindstone ọnụ. Onye ga-ẹdọk, na ndị ọzọ na a ga-hapụrụ. Abụọ ga-abụ na ubi. Onye ga-ẹdọk, na ndị ọzọ na a ga-hapụrụ. "
17:36 Na-aza, Ha wee sị ya, "Olee ebe, Jehova?"
17:37 Na ọ sịrị ha, "Ebe ozu ga-, na ebe, ugo ga-ezukọta. "